အနီး အဝေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အနီး အဝေး
Posted by ကျော်စွာခေါင် on Nov 16, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary, Short Story | 19 comments
လူသည် ဘ၀တခုကို စွဲလန်းခြင်းစိတ်ဖြင့် အရင်းခံကာ ဖြစ်တည်ကြသည်..။
မွေးဖွားခြင်းမတိုင်မှီက စတင် သန္ဓေတည်သော စွဲလန်းစိတ်သည်
ကျနော့်သား နောင်နောင်ကို မွေးကင်းစ ကတည်းက… တစ်ယောက်ယောက်ကိုများ ၊ဇာတိလမ်းပြတ်၊ ဇာတိပျောက်ကျနော် ပေးခဲ့ လျှင်၊ နောင်နောင် ကြီးလာသောအခါ ကျနော့်ကို အဖေဟု သတ်မှတ်မည်မဟုတ် သလို၊ နာယူကြီးပြင်းမှုသဘောတရား၊ စဉ်းစားဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်ပုံ၊ နေထိုင်မှု စရိုက်၊ အတွေးအခေါ်အယူအဆ
ဝေးခဲ့ ရသော ၊ဝေးနေဆဲဖြစ်သော ကျနော်ကတော့ ကျနော်ကြုံတွေ့ ရသော အကြောင်းအရာ၏ အခြေခံ
ဖြစ်တည်မှု……စီးဆင်းခြင်း မြစ်တစ်စင်း၏ သန္ဓေတည်ရာ ဘ၀ အကျိုးတရားကို တွေးနေတတ်သည်။
ဒါပေမယ့် ကျနော်သိလိုက်သော အကြောင်းအရာကို အိမ်သို့ ပြန်ပြေးလာပြီး အကိုအကြီးဆုံးကို
ကမ္ဘာကြီးသည် အပြားကြီး မဖြစ်နိုင်ကြောင်း နေ၀င် နေထွက်ခြင်းသည် အရှေ့ မှ ထွက်ပြီး အနောက်အရပ်သို့ ဝင်ခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာသည် လုံးကို လုံးရမည်။ အကယ်ရွေ့ အပြားကြီးကို အမိုးအုပ်ထားပါက ဒီနေ့ ..မနက် နေလုးံသည် အရှေ့ မှ ထွက်ပြီး အနောက်ကို ၀င်လျှင် နောက်နေ့ မနက်လင်းလျှင် နေ သည် အနောက်အရပ်မှပြန်ထွက်ကိုထွက်ရမည်..ယခု အနောက်က နေမထွက်ဘဲ အရှေ့ အ၇ပ်ကပင် နေပြန်ထွက်ခြင်းကြောင့် ၊ ကမ္ဘာကြီးသည် လုံးနေသည်ဟုပြောပြသောအခါ နဖူးကို လက်သီးနှင့် ခတ်ဆတ်ဆတ် ထိုးပြီးသည့်နောက် အဖေတို့ ကို သံတော်ဦးတင်ပြီးသကာလ တမျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံး တစ်မိသားစုလုံး ပြားနေသော ကမ္ဘာကြီးကို ကျနော်တစ်ယောက်ထဲ ထူးထူးခြားခြား လုံးသောကြောင့် ညနေစာထမင်းလုံးဝမကျွေးဘဲ ထားလေသည်။
မမ( အမ ၀မ်းကွဲ )လက်စွမ်းပြ လိမ်းပေးထားသော သနပ်ခါး ပါးကွက်ကြားလေးနှင့်အိမ်ရှေ့ မှာ
ထိုင်နေတုန်း မမအမျိုးသား ကိုချစ်ဆွေက “ညီညီ မင်းအဘိုးဆုံးတာ မင်းက မငိုဘဲနဲ့ သနပ်ခါးတွေလိမ်းပြီး လာထိုင်နေတယ်…ဖျက်လိုက်ဖျက်လိုက်” သူပြောမှ သနပ်ခါးဖျက်ရမည်ဆိုတာသိပြီး တံတွေးနှင့် ပွတ်သတ် ဖျက်လိုက်ရသည်..။
ကျနော် ရှာဖွေခြင်သော အမှန်တရား တစ်ခုအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချရင်း ၉တန်း
စာမေးပွဲ နောက်ဆုံးနေ့ မှာပင် အိမ်နဲ့ ဝေးရာသို့ထွက်ခွာရင်း ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ်တိုင်ရပ်တည်ခဲ့ရသည်။
ကိုယ်တိုင် သူ့ အသက်သတ်ခြင်းသည် အကုသိုလ်အလုပ်ဟု စွဲလန်းနေစိတ်နှင့် ကြံရာပါဖြစ်မှာကြောက်ပြီး
သူငယ်ချင်း (ငါးမျှား ဆရာကြီး) အကူအညီဖြင့် ငါးမျှားတန် အကောင်းစား တလက် ၀ယ်ပို့ ပေးခဲ့လေသည်..။
ပို့ ပေြး့ပီးနောက် အဖေ့ဘက်ကလဲ ဘာမှ မပြော ၊ကိုယ့်ဘက်ကလဲ ၀ယ်ပေးခဲ့သည့်အဖြစ်ကို မေ့ နိုင်အောင်
အဖေ ရေးလိုက်သော စာလဲ ဖတ်ရပါသည်……………။
လို့ ပါ..မင်းပို့ ထားတဲ့ ငွေတွေနဲ့အပါတို့၇ ဧကကျယ်တဲ့ မြေနေရာဝယ်ပြီး ငါးမွေးမြူရေးကန် ၃ကန် တူးပြီး ငါးတွေ မွေးခဲ့ တာ။
လောလောဆယ် လက်ငင်းရငွေကတင် သိန်း ၄၀ ကျော်နေပြီိ…နောက်ထပ်ရတဲ့ ငွေတွေနဲ့ငါးကန်ကိုလဲ
ကျွန်တော်လည်း တစ်ခုခု ကြုံလာတိုင်း
အထူးသဖြင့်.. မမျှော်လင့်ထားပဲ ကြုံလာတာတွေရှိတိုင်း
မဖြစ်စေချင်ပဲ၊ အဲလိုဖြစ်လာမှာတွေကို ကြောက်လို့
ကိုယ်သိပ်ကြောက်တာတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်လာတာ ခုလက်ရှိထိတိုင်အောင်ပဲဆိုတော့
“ကျွန်တော်တတ်နိုင်တာလည်း ဒါအကုန်ပါပဲ” လို့ ဆိုရတော့ပါပေမယ်ဗျာ။
စိုးရိမ်မှန်း ကြောက်မှန်းသိလေ… ကံကြမ္မာက ပိုပြီး အကြည်စားသန်လေဘဲ..ကိုစိုင်း..။
“ကျွန်တော်တတ်နိုင်တာလည်း ဒါအကုန်ပါပဲ” …လို့တွေးလိုက်တာထက် ပင်ပန်းခံပြီး နောက်တစ်ဆင့်ကို
“ ငါ့ ဒီ့ထက်ကို တတ်နိုင်သေးတာဘဲ ” ဆိုတဲ့ အတွေးလေး ဖြစ်လာပြန်ရော ကိုစိုင်းရေ..။
အေးအေးဆေးဆေး ဖတ်ဖို့သိမ်းထားမယ်
အခု အချိန်သိပ်မရလို့ 
Globalization ဆြာတွေပြောတော့ မနေ့တနေ့ကပဲ ကမ္ဘာ စပြားသွားပြီဆို.
…ဘာပြောလို့ ပြောရမှန်းတောင်မသိဘူးဗျာ…အမှန်တရားကို ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ခဲ့တာ
ပြုနိုင်ခဲသောအလုပ်ကို လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဇွဲနဲ့သတ္တိ ကိုချီကျူးလေးစားပါတယ် ကိုကျော်စွာရေ….
နားလည်မှုနဲ့ အားပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျ..။
အရှေ့ကနေထွက်ပြီး အနောက်က နေ၀င်တာကို ကြည့်ပြီး ကမ္ဘာကြီး လုံးတယ်လို့ စဉ်းစားမိတယ်ဆိုတဲ့ ဆြာခေါင်ရဲ့ ပင်ကိုယ်အသိ အတွေးအခေါ်ကို (ကိုယ်နဲ့နှိုင်းပြီး) အံ့သြချီးကျူးမိတယ်။
အဲဒီအချိန်က ကျနော်က ကစားနေရင်း နွား မြက်စားတာကို ကြည့်နေတာဗျ…
ကြည့်နေတုန်းမှာဘဲ နွားက မစင်စွန့်တယ်…အဲဒီအချိန်လေးမှာ တွေးလိုက်မိတာက အင်မတန်ကို မြန်တာ..
နွားချေးက မြေသြဇာ ဖြစ် ..ပြီးတော့ မြက်ပြန်ပေါက်..ပြီးတော့ နွားကပြန်စား..ပြီးတော့ မစင်စွန့်….
အဲဒီမှာ လည်ပါတ်နေတဲ့ သဘောလေးကို လှပ်ကနည်းလေးတွေ့ လိုက်ရတာပါ…။
နွားတစ်ကောင်က ကလေးတစ်ယောက်ကို ကျမ်းစာအုပ်တွေ တော်လှန်ဘို့ အသိတရားတစ်ခု ကျေးဇူးပြုခဲ့တာပါ…
ကျနော် ၇တန်းလောက်ကတည်းက အမဲသားမစားတော့တာပါ.. ခြေလေးချောင်း အားလုံးကိုပေါ့..
ကျနော့် ကျေးဇူးရှင် ဖြစ်ခဲ့လို့ ပါ..။
၆ တန်းမှာ အံ့သြစရာ ကောင်းလွန်းတဲ့ အိမ်မက်တခုကို မက်တယ်..အဲဒီကတည်းက ကျနော် ဘာသာရေးနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး
စွန့် စားရတော့မယ်..အိမ်က ထွက်ပြေးမှ ကိုယ်လိုချင်တာ ၇မယ်ဆိုတာ စဉ်းစားတာ..ဒါကြောင့် ၈တန်းမှာ တခါပြေးတယ်..ပြန်မိတယ်…စားပွဲထိုးလေးလေ…မနု မှတ်မိမှာပါ..။
အပေါ်ယံ ကြည့်ရင် အနုပညာအတွက်ပေါ့..အတွင်း လျှို့ ဝှက်ရည်မှန်းချက်ကတော့…
ကျနော် နေရာမှားပြီး ၀င်စားရင်း ၀ဋ္ဋ်ကြွေးဆပ်နေ၇လို့ရုန်းနေခဲ့တာပါ..။
လေးလေးနက်နက် သိတဲ့ အသိတရားလို့ နားလည်မိပါတယ်။
​စေတနာသာ အဓိက ဖြစ်​မယ်​ထင်​ပါတယ်​..
ပြုသူအသစ်​ ဖြစ်​သူအ​ဟောင်းမို့ ..
​နောင်​ထပ်​​ပေးလည်း လိုရာသုံးဆိုပြီး စိတ်​ပြတ်​ပြတ်​နဲ့​ပေးနိုင်​တာပဲ​လေ…
ခုလို သင်ပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ..
မိဘကိုတော့ ခုထိ ကျေးဇူးဆပ်နေတုန်းပါ..ကျနော်က ဘာသာခြားမိခင်ဝမ်းမျာ ၀င်စားခဲ့လို့အယူအဆအတွက် စုန်ကန်ခဲ့ပေမယ့်
= ငါသာ ဒီမိခင်ရဲ့ဝမ်ားကာတိုက်မှာ ၀င်ခွင့်မရဘဲ… တရိစ္ဆာန်မိခင်ဝမ်းမှာ ၀င်စားခဲ့ရင်…
စာပေကိုလဲ ငါဖတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး… တရားတော်ကိုလဲ နာယူနိုင်စွမ်းရှိမှာ မဟုတ်ဘူး..
သရဏဂုံကိုလည်း ရွတ်ဆိုနိုင်တဲ့ ဘ၀ ရောက်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့တွေးမိတိုင်း ကျနော့် မာမီကို အထပ်ထပ် ကန်တော့ပါတယ်..။
ဆြာခေါင်ရဲ့ပိုစ့်တွေထဲမှာမှ ဒီပိုစ့်ကိုတော့ အံသြခြင်းများစွာနဲ့ဖတ်သွားရတဲ့ပိုစ့်ပါပဲ။ ဆြာခေါင်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ အတွေးအခေါ် ပြည့်စုံကြွယ်ဝတဲ့ဗဟုသုတတွေကို အရမ်းကိုအံ့သြမိပါတယ်။
ငါးစားရလို့..။ ငါးစားနိုင်လို့..။ ငါးးးစားခွင့်ရှိလို့…။
ကမ္ဘာ ပြားပြားလုံးလုံး ငါးကတော့ စားရပါတယ်..
ကျနော် လာလည်တဲ့အခါ ငါးပြေမ ချက်ကျွေး …ဒါဗြဲ..။
အပေါ်ကမန့်ကြသလိုပဲ ဖောက်ထွက်နိုင်တာ ချီးကျူးပါတယ်။
ကျမငယ်သူငယ်ချင်းမလေး တယောက်လည်း ဘွဲ့ရအပြီးမှာ ဒီလောက ဒီဘာသာကနေ ဖောက်ထွက်ပြီး အဆက်အသွယ်အားလုံးကို ဖြတ်သွားတယ်။
မုဆိုးဇနီး သောတာပန် အကြောင်းသိတယ်မလား။
လေးမြားကို မယားဝတ္တရားအရ ယူငင်ပေးရပေမယ့် သေစေလိုစိတ်မပါလို့ ပါဏာတိပါတာ မဖြစ်ဆိုတာလေ။
မာရ်ငါးပါးထဲမှာ ကိလေသမာရ်နဲ့ ဒေ၀ပုတ္တမာရ် ဟာ ကိလေသာနှောင်အိမ်က ရုန်းထွက်မယ့်သူတွေကို ဆွဲထားဖို့ အမျိုးမျိုးကြိုးစားကြပါတယ်။
လွတ်ချင်လေလေ အဆိုးအကောင်း လောကဓံတွေ ပိုတိုက်ခိုက်လေလေ ပါပဲ။
အောင်နိုင်လိုက်မိတဲ့အခါတော့ ပီတိကို ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်တော့ဘူး။
ကြိုးစားကြပါစို့လို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း အားပေးရင်း ခေါင့်ကိုလည်း အားပေးပါတယ်။
ကိုယ့် အသိုင်းအဝိုင်းဟာ ကိုယ် နဲ့ ယုံကြည်ရာမတူ တဲ့အခါ
အဲဒီ ဒိုင်းမေးရှင်း ထဲက ဖောက်ထွက်ဖို့ စဉ်းစားရတာကိုက အတော်စွန့်စားရတာပါ။
အဲလို ကောင်းသောလမ်းကို ချိုးနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်လို့ ခေါင့် အတွက် ဝမ်းမြောက် ဝမ်းသာ ဒီ စာကို ဖတ်သွားကြောင်းးးးး
ကျော်စွာခေါင် ဒေါ်လာရောင်နဲ့ မော်တာထောင်မတ်တာ ဘော်ဒါဆောင်မှာ စော်လာကြောင်ဖို့ဂိုးဗျ.. ပလို့ဂျိ…
ဖော်ကာမောင် ပျော်စရာနောင်မို့ ယသော်ဓရာမောင်ရေ ကော်သာဆောင်ပေဒေါ့… ပူနောင်ချပ်ခြိမ်း ပူချပ်ခြိမ်း…။
ဒါနဲ့ သာမီးလေး ဘယ်အရွယ် ရှိဗဒုံး.. ကကျော်စွာ့ မိန်းမက တီလုပ်မလား.. ဓဆိုရင် ပန်းသေးမလေး ဖြူဖြူဖွေးနေမှာဗဲ… ကန်တော့တယ်ဗျာ.. ယောက္ခထီးရော ယောက္ခမရော နှစ်ယောက်စလုံးဂို တန်ဆောင်မုန်းည ဂါဝရအဖြစ်…။
သဂျီးမာမွတ်ခိုမ်.. ဝင်မပါနဲ့ ငြိမ်ငြိမ်နေ… ဗျားဂို သီတင်းကျွတ်တုံးက ဘီအမ်ဒဗလျူ ၂၀၁၄ မော်ဒယ်အသစ်နဲ့ လာကန်တော့ပီးဗီ..
ဟို နေ့ က ဒီ ပို့စ် လေး ဖတ်ရတုန်းက ပြောချင်တာက အပြည့်
မန့် ဘို့ ခက်လို့ မမန့် လိုက်ရဘူး
အခု ပြန်ဝင်တော့ ဟိုနေ့ က ဖီလင် မရတော့ပြန်ဘူး
ဘ၀ မှာ ထူးခြားတဲ့ အသိ အမြင် အတွေးတွေ ရတာက
အသက်အရွယ် နဲ့ မဆိုင်ဘူး ဆိုတာ မသိသေးတဲ့ လူတွေ ရှိသေးတယ် ဗျ